Ole Gunnar Solskjär ayaa u jawaabaya Jurgen Klopp
Ole Gunnar Solskjär ayaa jawaab ka bixiyay hadaladii Jurgen Klopp ee ku saabsanaa tirada rigoorooyinka lagu abaal mariyay Manchester United kulankii Liverpool.
Klopp ayaa ka carooday in Sadio Mane labo jeer rigoore loo diiday ciyaartii habeenkii Isniinta guuldarro 1-0 ka soo gaartay Southampton wuxuuna ka hadlay ka dib Manchester United tirada rigoorooyinka la siiyay
“Waxaan maqlay in Manchester United ay heshay rigoorayaal ka badan labo sano gudahood marka loo eego shan sano iyo bar,” ayuu yiri Klopp. “Wax fikrad ah kama haysto hadii ay khaladkayga tahay ama sida ay u dhici karto.”
Macluumaadka Jarmalku sax ma ahayn, laakiin illaa iyo hadda, Manchester United waxaa lagu wadaa 42 rigoore tan iyo markii Solskjaer uu qabtay Old Trafford bishii Diseembar 2018, halka Liverpool ay 46 rigoore ka dhigtay shan sano iyo badh uu Klopp ahaa Anfield.
Solskjaer ayaa u weeraray Klopp wuxuuna sheegay in sababaha ay tababarayaasha uga hadlaan tirada rigoorooyinka ay tahay inay saameyn ku yeeshaan garsoorayaasha.
“Taasi waa xaqiiqo. Taasi waa jawaabtayda,” ayuu yiri tababaraha reer Norway kahor kulanka caawa ee Semi-finalka Carabao Cup ee ay wajahayaan Manchester City.
“Waa run inaan heysano wax ka badan isaga, laakiin waa inay sameeyaan, ma aqaano inta rigoore ee la bixiyay.
Kuma xisaabtamayo ciqaabtooda, sidaas darteed haddii ay waqti ku lumiyaan ka walwalka inta qalad ee ka dhacay aagga ganaaxa, waqtiga kama luminayo.
Kama hadli karo sababta ay tababarayaasha kale u dhahaan waxyaalahan oo kale.